October 5, 2020 - Amawpyay
လူကောင်း ဆိုသည်မှာ ဟဲ့၊ ဘေးအိမ်က ဖြူလေးက တော် တယ်နော်။ အရွယ်ကောင်း တုန်း လက်ထပ်ပြီးတော့ ကလေးလည်း ရနေပြီနော်။ ငါကတော့ဟယ် ငါကတော့ အဲဒီလို လူမျိုးနဲ့ ဆိုရင် အစပ်မတည့်ပါ ဘူးကွယ်။ ဘာလို့လဲ၊ သူနဲ့ရန်များ ဖြစ်ဖူးလို့လား ??? ဘာရယ်လို့ မဟုတ် ပါဘူးဟယ် ငါက အပျိုကြီးပဲ လုပ်တော့မယ် လို့ ပြောတော့ သူက “ကောင်း တာပေါ့၊ သူများတွေ ဘာ ပဲပြောပြော ဂရုမစိုက် နဲ့လို့” ပြန်ပြော တယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ ခံစားချက် မရှိသလို ပြန်ပြောတော့လေ ငါစိတ် ထဲမှာ တမျိုးကြီး …
မနက်စာကို ဘာကြောင့်သေချာ စားသင့်တာလဲ
မနက်စာကို ဘာကြောင့်သေချာ စားသင့်တာလဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းဆောင် တာတွေကို လျှင်မြန် သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက် ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ မနက်စာ ကိုသေချာစားဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ လူအများစုဟာ အိပ်ရာ ထနောက်ကျလို့၊ ရုံးနောက်ကျနေလို့၊ ကျောင်းနောက်ကျလို့ စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ မနက်စာကိုသေချာ မစားဖြစ် ကြ ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မနက်စာကဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ ဘာလို့သေချာ စားသင့်လဲ ဆိုတာကို ပြောပြပေး ပါမယ်။ လူအများစုက မနက်စာ ဆိုရင်သေချာ မစားဖြစ်ဘဲ ကော်ဖီတခွက်၊ ပေါင်မုန့်တချပ်နဲ့ပြီးလိုက်ကြတာ များပါ တယ်။ မနက်စာဆိုတာ အာဟာရ ပြည့်ပြည့်၀၀ ပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓာတ်၊ ဗီတာမင်အုပ်စု၊ အသားဓာတ်၊ …
ဆီးကျောက်တည်ရောဂါအတွက် သဘာဝဆေးနည်း မိန်းမမှာမီး ယောကျာ်းမှာဆီး ဆိုသည့် စကားအတိုင်း အမျိုးသမီးတို့ အတွက် မီးနေချိန်သည် အလွန်အရေးကြီး သလို အမျိုးသား များ အတွက် ဆီးရောဂါ သည် အလွန်အရေးကြီးလှ ပါ သည် ။ ဆီးနှင့် ပတ်သက်သော ရောဂါ များမှာလည်း အမျိုးမျိုးရှိနေ ပါသည် ။ ဆီးကျောက်တည်ခြင်းသည် အလွန် အန္တရာယ် ကြီးသော ရောဂါ တစ်ခု ဖြစ်နေ ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ဆီးကျောက်တည် သူများ အတွက် သဘာ ၀ဆေးနည်းကောင်း တစ်ခုကို မျှဝေပေး လိုက် ပါ သည်။ ဆေးနည်း(၁) …
အနေအထိုင် အေးဆေးသူတွေရဲ့ လျှို့ဝှက် (၇)
အနေအထိုင် အေးဆေးသူတွေရဲ့ လျှို့ဝှက် (၇) ၁ – သူများထက်ခင်တတ်တယ် အနေအေးပေမဲ့ သူတို့ကို အရမ်းခင် တယ်လို့ ခံစား ရပြီး သူတို့ ကလည်း အရမ်းခင်တယ့်လူဆို စကားတွေ အများကြီးပြော ပါ တယ်။ ၂ – သူများထက်ပိုသိ၊ ဒါပေမဲ့ မပြော သူတို့က လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ အခါ လေ့လာစောင့်ကြည်နေ သူတွေဖြစ် ပါတယ်။ စကားတွေအများကြီး မပြောလို့ ဘာမှ မသိဘူး မထင် ပါနဲ့။ သူတို့က အားလုံးကို တိတ်တိတ်လေး အကဲခတ်နေ သူမို့ သူများထက် ပိုသိ တတ် ပါတယ်။ ၃ – သူငယ်ချင်း သူငယ်ချင်းနည်းပေမဲ့ …
ခုလို ကာလကြီးမှာ စိတ် ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ပါးသက်သာ စေနိုင်တဲ့ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း (၆)မျိုး
ခုလို ကာလကြီးမှာ စိတ် ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ပါးသက်သာ စေနိုင်တဲ့ အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း (၆)မျိုး ခုလို ကိုဗစ် ကာလ မှာတော့ လူတိုင်းလိုလို အနည်းနဲ့ အများ စိတ်ဖီစီးမှုတွေ ရှိ နေတတ်ပါတယ်။ ကိုဗစ် ရဲ့ နောက် ဆက် တွဲ ကြောင့် စီးပွားေ ရးဘက်မှာ ထိခိုက်န စ်နာမှုတွေ ရှိ နေ သလို တစ်ဖက်မှာ လည်း ကျန်းမာရေး အတွက် စိုးရိမ် ပူပန် နေရတဲ့ ဒုက္ခ ကလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဖြစ်ပေါ် ခံစားနေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊စိုးရိမ် ကြောင့်ကြ မှုေ တွကို လျော့ ပါး …
အသဲကွဲပြီးနောက် အချစ်သစ်ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ …?
အသဲကွဲပြီးနောက် အချစ်သစ်ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ …? ကိုယ့်ချစ်သူက ထားခဲ့လို့ စိတ်ညစ်နေ တဲ့သူ auntymay ပရိသတ်ကြီးထဲမှာ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကြေကွဲ ပူဆွေးနေစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ရင်ဘတ်ထဲကနေ အချိန်အကြာကြီး တန်ဖိုးထားဖို့ ဆိုတာ အတ္တ အရတော့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင် ပါဘူး။ ဒီတော့ အသဲကွဲပြီးနောက် အချစ်သစ်ကို ရှာလိုသူတွေ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေ ကြိုးစားကြည့် ကြဖို့ တိုက်တွန်းလို ပါတယ်။ (၁) စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ စပါ အသစ် တစ်ယောက်နောက်ကို လိုက်မယ် ဆိုရင် အတိတ်မှာ ရခဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို အရင်မေ့ပစ်အောင် လုပ်ရ ပါမယ်။ ဒါမှသာ အသစ် …